Barlow Sy Ny Fomba Vaovao Hanamboarana Tetezana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2017 7:06 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Janoary 2005)
Nandany ampaham-potoana tsara aho nandritra ireo andro vitsy lasa nieritreretana mikasika ny heviteny telo an'i Hossein Derakhshan ho an'ny blaogy: varavarankely, tetezana sy kafe.
John Perry Barlow, izay mahazo aina fatratra amin'ny aterineto, toy ny amin'ny tontolo ”tena izy” rahateo, dia manana tantara mahafinaritra mikasika ny fomba ahafahan'ny Skype ho lasa teknolojia tetezana. Naharay antso kitanitany tamin'ny finday avy amina vehivavy tanora iray ao Azia izy izay maniry ny hiresaka aminy, satria ”John” no anarany, izay midika fa miteny Anglisy izy, ary antenain'izy ireo ny hampihatra ny fahaizany Anglisy.
Nahiana ho fisolokiana tamin'ny voalohany, na resaka izay haingana dia hitohy amin'ny fangatahana fanambadiana hahafahana mahazo karatra maitso, nanatsoaka tamin'izany i Barlow hoe nanana vintana tsotra izao izy hihaona taminà olona avy any Shina na Vietnam maniry te-hinamana aminy.
Telo aminay aty Etazonia no mahatadidiy fa fanirian'ny AT&T ny mba ”hahatratra sy hahakasika olona”. Manome fahafahana hahatratra sy hikasika olona izay mbola tsy nihaona taminao mihitsy ny Skype… tsy misy sarany.
Tsy noeritreretiko mihitsy ny hitady olona avy amin'ny firenena mahaliana ahy sy hiantso azy ireny amin'ny Skype. Fa angamba mety tetika vaovao mba hanorenana tetezana fifandraisana eo amin'ny olona avy amin'ny firenena maro samihafa ity. Raha mba John mantsy ny fanampin'anarako…